Gudoomiye Ilmaynaya Oo Madaxweynihiisi U gudbiyay Cabasho | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Faallo, WARARKA	> Gudoomiye Ilmaynaya Oo Madaxweynihiisi U gudbiyay Cabasho
Shacabka degmada Afgooye oo cabashadii ugu adkayd u gudbiyay Madaxweynaha Iyo Ciidankii Oo Fadeexad Ka qaaday Goobta.
Iyadoo ay soo kordhaysay qayla dhaanta ka imanaysa dadka kunool deegaanka Afgooye iyo waliba dadka ku socdaala wadada dheer ee udhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye kana cabanaya kuna eedeynaya in xad gudubyo ay u geysanayaan kooxo qawlaysato ah oo Ciidan ah oo ka tirsan ciidanka dawladda ee ku sugan deegaanka Afgooye ayaa Madaxwynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayo ay socdaal ku tageen magaalada Afgooye.
Madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay kulamo la yeesheen odoyaashii deegaanka waxayna ka dhageysteen warbixin ku saabsan cabasho iyo eedeymo loosoo jeediyay ciidanka taas oo ah inay dhib iyo xad gudubyo ay dadka deegaanku kala kulmayaan qaar ka tirsan ciidanka.
Waxaase arrin cusub ah in cabashadaasi dadkii soo jeediyay uu kamid ahaa Gudoomiyihii Degmada Afgooye ee Xukuumadda KMG Soomaaliya, cidda lagu eedeynayo inay falkaa gayeteena ay yihiin askar ka tirsan ciidanka dawladda.
Ciidankan yaa xukuma? Xaggayse ka yimaadeen? Yeeyse ka Amar qaataan? Meesha misa dawladood ayaa ka jira? Ciidanka ruuxiisu miyaannu ubaahnayn in la sifeeyo oo laga dhex saaro Qawlaysatada?
Tani miyaysan ahayn fadeexad usoo hoyotay Ciidanka Qaranka,Xukuumadda iyo Qaranka Soomaaliyeed?
Sideese shacabku ay u aaminayaan ciidan qaran?
Gudoomiye Degmo ama Gobol sida dawladnimo iyo caalamkaba lagu yaqaan wuxuu wakiil u yahay dawladda iyo madaxweynaha, Gudoomiyuhu wuxuu sheegay inuu san ahayn awood ay kaga hortagaan qawlaysatadaas,wuxuuna yidhi-
“Annaga mahaysanno awood aan kaga hortagno”.
Gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdullaahi Axmed Iideey oo kamid ahaa dadkii ay la kulmeen madaxweyne Shariif iyo wafdigiisii isugu jiraya wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada ayaa isagoo ilmaynaya ka warbixiyay xaaladda Afgooye ka taagan iyo dhibta ay shacabka halkaa ku dhaqan ay kala kulmeen qawlaysato aan u qalmin in ciidan qaran lagu sheego wuxuuna madaxweynaha kacodsaday in uu tallaabo degdeg ah ka qaado ciidankaas,isla markaana wuxuu goobta ka sheegay xad gudubyo uu ku eedeeyay ciidankaasi ay gaysteen.
Haddaba qoraalka hoose waa siduu uu gudoomiyaha Degmada oo isagoo ilmanaya uu ku gudbiyay cabashada,sidaana waxaa kasoo lalaisay oo aad ka dhagaysan kartaa BBCda laanteeda af-Soomaaliga.
“Annaga problem ka (dhibaatada) ugu weyn ee naga haysta wadada ka soo galaysa (= ka imanaysa) Xamar ilaa iyo munkayga (= boosteejada, farsada ama halka Baabuurtu ay kabaxaan ee Afgooye), dhibaatooyin weyn baa naga haysta,Shicibkana mar walba waa laga oohisiiyaa, waa ladilaa, waa lagaraacaa, wax soconaaya maaha(=looma adkaysan karo,lama aqbali karo)”.
“Anigu waxaan leeyahay ciidankaa meesha jooga talaaabo degdeg ah aad ka qaadaan madaxweyne”.
Wax soconaaya maaha in lafurto,la dhaco,lajidh dilo,masoconayso waxaan yeeli karnana maaha.
Mar walbana waa nagu soo noqnoqoteen,waxaan nimanka taliayaasha ka ah qaarkood …….ma u qalmaan,mana noqon karaan.
Marka waxaan rabnaa inaad tallaabo cad aad ka qaadid ciidankaa meesha jooga oo dadka jidh dilaaya oo haweenka fara -xumaynaya,oo dhacaaya had iyo jeer.
“Annaga mahaysanno awood aan kaga hortagno”,waxaan rabnaa” inaad tallaabo ka qaadid maanta kadib inay nagu soo noqdaan marabno”.
Giraantu markay halkaa botorinayso ayaa la sheegay in warbaahinta laga codsaday inay isu daayaan odoyaasha Deegaanka iyo madaxda dawladda.
Waxaase la sheegay in markii shirku soo dhamaaday in madaxweyne Shariif uu raali galin kasiiyay shacabka Afgooye dhacdadaas. (Akhri:Madaxweyne Shariif Oo Ku Dhawaaqay tallaabooyin ay Dawladdu ka Qaadatay Xaaladda Afgooye)
Tags: Afgooye, Fadeexad, Kormeerka Dawladda, law and crime, Muqdisho, News, SOCIETY, Somali, Soomaaliya, Warka
Madaxweyne Shariif Oo Ku Dhawaaqay tallaabooyin ay Dawladdu ka Qaadatay Xaaladda Afgooye – SAWIRRO Madaxweyne Shariif Oo Socdaal Ku Tagay Markii Saddexaad Afgooye (July 30,2012),Kulamana Laqaatay Odayaasha – SAWIRRO